Ithini IBhayibhile Ngoqhawulo-mtshato Nokwahlukana? | UThando LukaThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChavacano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitonga (SaseZimbabwe) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuabo IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole SaseBissau Guinea IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGuna IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKazakh IsiKekchi IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKosrae IsiKrio IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLomwe IsiLuganda IsiLuo IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMixe IsiMizo IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdau IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNiuea IsiNorway IsiNyaneka IsiNyungwe IsiNzema IsiOssetia IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPalau IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiRashiya IsiRomania IsiRotuman IsiRunyankore IsiRutoro IsiSamoa IsiSango IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTarascan IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVezo IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isiLow German isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Oko Kuthethwa YiBhayibhile Ngoqhawulo-mtshato Nokwahlukana
UYehova ulindele ukuba abo batshatileyo bahlale bethembekile kwizifungo zabo zomtshato. Xa wayetshatisa indoda nomfazi wokuqala, uYehova wathi: “Indoda . . . inamathele emfazini wayo baze babe nyama-nye.” Kamva, uYesu Kristu wawaphinda la mazwi, waza wongeza esithi: “Ngoko ke, oko uThixo akubophelele ngedyokhwe ndawonye makungahlukaniswa mntu.” (Genesis 2:24; Mateyu 19:3-6) Ngenxa yoko, uYehova noYesu bajonga umtshato njengeqhina elihlala lihleli de elinye iqabane life. (1 Korinte 7:39) Ekubeni umtshato ulilungiselelo elingcwele, uqhawulo-mtshato alufanele lujongwe njengento engenamsebenzi. Enyanisweni, uYehova uluthiyile uqhawulo-mtshato olungasekelwanga kwiZibhalo.—Malaki 2:15, 16.
Ziziphi izizathu zokuqhawula umtshato ezamkelwa ziZibhalo? UYehova ukuthiyile ukukrexeza nokuhenyuza. (Genesis 39:9; 2 Samuweli 11:26, 27; INdumiso 51:4) Ujonga ukukrexeza njengento ecekisekayo kangangokuba uyavuma ukuba kube sisizathu sokuqhawula umtshato. (Ukuze ufumane inkcazelo ngoko kuthethwa kukukrexeza, funda ISahluko se-9, isiqendu sesi-7, esixubusha ngohenyuzo.) UYehova unika iqabane elimsulwa ilungelo lokugqiba enoba liqhubeke litshate neqabane elikrexezileyo okanye liwuqhawule umtshato. (Mateyu 19:9) Ngenxa yoko, ukuba iqabane elimsulwa ligqiba kwelokuba liwuqhawule umtshato, uYehova akaluthiyanga olo qhawulo-mtshato. Kwelinye icala, ibandla lamaKristu alikhuthazi mntu ukuba aqhawule umtshato. Enyanisweni, zikho iimeko ezinokubangela ukuba iqabane elimsulwa ligqibe kwelokuba lingawuqhawuli umtshato, ngokukodwa ukuba iqabane elikrexezileyo liguquka ngokwenene. Ngamafutshane, abantu abanezizathu ezamkelwa ziZibhalo zokuqhawula umtshato bafanele bazenzele isigqibo baze bamkele nayiphi na imiphumo enokubangelwa siso.—Galati 6:5.
Kwezinye iimeko ezingaqhelekanga, amanye amaKristu aye agqiba kwelokuba ahlukane okanye aqhawule umtshato nangona iqabane lawo lingakrexezanga. IBhayibhile ithi xa kunjalo, elo qabane liqhawula umtshato limele ‘lihlale lingatshatanga okanye kungenjalo lixolelane’ neqabane lalo. (1 Korinte 7:11) Loo mKristu akanalungelo lokuba atshate nomnye umntu. (Mateyu 5:32) Makhe sixubushe iimeko ezimbalwa ezingaqhelekanga abanye abaye bazijonga njengezizathu zokwahlukana namaqabane abo.
Xa umyeni engayondli ngabom intsapho yakhe. Intsapho inokuhleleleka, ingabi nazo izinto ezibalulekileyo ukuze iphile ngenxa yokuba umyeni engayondli, nangona enawo amandla okwenjenjalo. IBhayibhile ithi: ‘Ukuba nabani na akawalungiseleli amalungu endlu yakhe, ngokuqinisekileyo ulukhanyele ukholo yaye mbi ngaphezu kongakholwayo.’ (1 Timoti 5:8) Xa indoda enjalo ingafuni ukwahlukana nalo mkhwa, umfazi unokugqiba enoba akhusele impilontle yakhe neyabantwana bakhe ngokwahlukana nayo ngokusemthethweni kusini na. Kakade ke, abadala abangamaKristu bafanele balumke xa beqwalasela isityholo sokuba umKristu akafuni kondla intsapho yakhe. Ukungafuni ukondla intsapho yakho kunokuphumela ekubeni ususwe kubudlelane.
Ukuxhatshazwa okugqithiseleyo emzimbeni. Iqabane elixhaphazayo linokusebenzisa ugonyamelo kwiqabane lalo kangangokuba impilo nobomi balo bube sengozini. Ukuba elo qabane lixhaphazayo lingumKristu, abadala bebandla bafanele benze uphando ngezo zityholo. Ukugqajukelwa ngumsindo nogonyamelo zizinto ezinokubangela ukuba umntu asuswe kubudlelane.—Galati 5:19-21.
Xa iqabane lomntu limenza angakwazi kwaphela ukunqula uYehova. Iqabane linokusoloko lizama ukwenza ukuba elinye iqabane lingakwazi kwaphela ukunqula uThixo okanye linokude lilinyanzele ukuba laphule imiyalelo yakhe ngandlel’ ithile. Xa kunjalo, iqabane elisengozini limele ligqibe enoba ekuphela kwendlela ‘yokuthobela uThixo njengomlawuli kunabantu’ kukwahlukana ngokusemthethweni neqabane lalo kusini na.—IZenzo 5:29.
Kuzo zonke ezi meko zingaqhelekanga zichaziweyo, akakho umntu onelungelo lokunyanzela iqabane elimsulwa ukuba lahlukane okanye lingahlukani neqabane lalo. Nangona abahlobo abakhulileyo ngokomoya nabadala benokulixhasa baze balicebise besebenzisa iBhayibhile, abanakuzazi zonke iinkcukacha zeyona nto yenzekayo phakathi kwendoda nomfazi wayo. NguYehova kuphela owaziyo. Kakade ke, umfazi ongumKristu akayi kubonisa ukuba uyambeka uThixo nelungiselelo lomtshato ukuba ubaxa iingxaki zakhe zomtshato kuba efuna ukwahlukana nomyeni wakhe, ibe oko kuya kusebenza nakumyeni. UYehova uyabona xa kusenziwa amaqhinga ngenjongo yokwahlukana namaqabane, enoba umntu angazama kangakanani ukuwafihla. Eneneni, “zonke izinto zize yaye zibhencekile emehlweni alowo simele siphendule kuye.” (Hebhere 4:13) Kodwa akakho umntu ofanele agxeke umKristu obhenela ekwahlukaneni neqabane lakhe xa ebesengozini kangangexesha elide. Ngamafutshane, “sonke siya kuma phambi kwesihlalo sokugweba sikaThixo.”—Roma 14:10-12.